ဆုရတီရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဆုကဗျာက ငွေကြေး ကျပ်တည်းနေသူများ ၊ စျေးရောင်းမကောင်းသူများ အတွက် လာဘ်ရွှင်ငွေဝင်စေပြီးလှူဒါန်း ဖို့ ငွေရှိနေစေမယ့် နည်းလမ်း ( ၃ ) ချက် ကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးပါခဲ့ပါတယ်။ | Popular
ဆုရတီရတနာဆိုင္ပိုင္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆုကဗ်ာက ေငြေၾကး က်ပ္တည္းေနသူမ်ား ၊ ေစ်းေရာင္းမေကာင္းသူမ်ား အတြက္ လာဘ္ရႊင္ေငြဝင္ေစၿပီးလႉဒါန္း ဖို႔ ေငြရွိေနေစမယ့္
နည္းလမ္း ( ၃ ) ခ်က္ ကို ပရိသတ္ေတြကိုမၽွေဝေပးပါခဲ့ပါတယ္။
👍🏻👍🏻👍🏻နံပါတ္ (၁) နည္းလမ္း👍🏻👍🏻👍🏻
🤗ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ဂါထာ🙏ကို
👉🏻မနက္တိုင္း ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ေပးရမွာ ျဖစ္ သလို တစ္ေန႔ ပုတီး ၉ ပတ္ ၉ ရက္ တစ္ႀကိမ္ အဓိဌာန္ ဝင္ေပးရပါတယ္ရွင္ 🙏🙏🙏
☝🏻ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ဂါထာ🙏
🦋အရဟံ ဗဟိ-အန္တ္တ-ဇယံ သုဂတံ
အမိတံ ဝိရဇံ လလိတံ
စရဏံ တိ-ဘဝူပ-သမံ ယမကံ
သုခဒံ သရဏံ ပဏမာမိဇိနံ🦋
✌🏻✌🏻✌🏻နံပါတ္ (၂) နည္းလမ္း✌🏻✌🏻✌🏻
🌳ေညာင္ ( ၁၀ ) ပင္ အဓိဌာန္ 🌲ဝင္ရင္
အမၽွေဝ သာဓုေခၚတဲ့အခါ အသုံးျပဳၾက တဲ့
သိဒၶိတင္ 🔔စမအင္း ေခါင္းေလာင္းေလး🔔
ေတြကို အိမ္ေနရင္း 💁🏼‍♀️ဆိုင္ထိုင္ရင္း 🗣
💵မိမိ ရဲ့လခ (သို႔)💸💴ေန႔စဥ္
ဦးဦးဖ်ားဖ်ားနိုင္သေလာက္ေငြ ပမာဏ ကို
💛ေရႊေရာင္ ကလပ္ေလး ေပၚတင္.
🔔သိဒၶိတင္ စမ အင္း ေခါင္းေလာင္းေလး🔔
ပုံပါအတိုင္း နဲ႔ဖိထား.ပါေနာ္ 🤎🟥🟩🟦
👌🏻””ယ ခုလႉထားတဲ့ တပည့္ေတာ္ရဲ့
သမၼာအာဇီဝ ဝင္ေငြ ေတြကို ဘုရား
တရား သံဃာ လႉဒါန္းဖို႔အတြက္ပဲ
သုံးပါမယ္ ဘုရား “””🙏🏻လို႔
ၿပီးရင္ 🔔စမ အင္း ေခါင္းေလာင္း ေလး🔔ကို
ေသခ်ာေလး တီးေပး ရင္း 👋🏻👋🏻👋🏻
👄🔔”လာဘ္ရႊင္ေစ 💍ေငြဝင္ေစ” 🔔👄ဟု
( ၃ ) ခါ ေလာက္ဆိုကာ …ေန႔စဥ္ ေခါင္းေလာင္း
🌸🌺ဘုရားပန္း ေတြ သစ္သီးေတြ ဝယ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္…
ဝယ္ျခမ္းတာ စသျဖင့္ လိုရာျပန္လႉလို႔ရပါတယ္…ရွင့္🌿✅
🚫ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ 💯သုံးဖို႔မဟုတ္ပါဘူးေနာ္…❌
🛑ေလာကီပညာအရ ေငြဝင္ ရန္
နာမ္ တူဓာတ္ဆင္ထားျခင္းပါ..ရွင္ 🍁🌷🌹
စီရင္ေပမယ့္ ပိုၿပီး အက်ိဳး ထူးတာက
မိမိရဲ့အာစိဏ္ဏကံကုသိုလ္ အက်ိဳးေပး က
လက္ငင္း အက်ိဳးေပးေစနိုင္ပါတယ္…ရွင့္ 🌼🌸🌺
လႉဖို႔အတြက္စု ၿပီးသားျဖစ္သြားေရာ ေလ ေနာ္ 🌝🌞
🤟🏻🤟🏻🤟🏻နံပါတ္ (၃) နည္းလမ္း 🤟🏻🤟🏻🤟🏻
💪🏻ေန႔စဥ္ မဟာသမယသုတ္ေတာ္ႀကီး ၃၉ ပိုဒ္ကို
တစ္ေန႔ (၃) ေခါက္ အနည္းဆုံး ပူေဇာ္ပါ 🙏🏻
ေစ်းေရာင္းမေကာင္း ခ်ိန္ ဆို
တစ္ေန႔ ၉ ေခါက္ ရြတ္ဆိုပါ ရွင့္ 😌😌😌
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ့ အသံဖိုင္ ဖြင့္
လည္း ပူေဇာ္နိုင္ပါ တယ္ ေနာ္ 🙏🏻
ဆုဆိုင္မွာ ဓမၼဒါန ပူေဇာ္ဖို႔ ေန႔စဥ္ လႉေနတဲ့
ဆုရတီရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဆုကဗျာကငွေကြေး ကျပ်တည်းနေသူများ ၊ စျေးရောင်းမကောင်းသူများ အတွက် လာဘ်ရွှင်ငွေဝင်စေပြီးလှူဒါန်း ဖို့ ငွေရှိနေစေမယ့်
နည်းလမ်း ( ၃ ) ချက် ကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးပါခဲ့ပါတယ်။
👍🏻👍🏻👍🏻နံပါတ် (၁) နည်းလမ်း👍🏻👍🏻👍🏻
🤗ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ ဂါထာ🙏ကို
👉🏻မနက်တိုင်း ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပေးရမှာ ဖြစ် သလို တစ်နေ့ ပုတီး ၉ ပတ် ၉ ရက် တစ်ကြိမ် အဓိဌာန် ဝင်ပေးရပါတယ်ရှင် 🙏🙏🙏
☝🏻ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ ဂါထာ🙏
🦋အရဟံ ဗဟိ-အန်တ်တ-ဇယံ သုဂတံ
✌🏻✌🏻✌🏻နံပါတ် (၂) နည်းလမ်း✌🏻✌🏻✌🏻
🌳ညောင် ( ၁၀ ) ပင် အဓိဌာန် 🌲ဝင်ရင်
အမျှဝေ သာဓုခေါ်တဲ့အခါ အသုံးပြုကြ တဲ့
သိဒ္ဓိတင် 🔔စမအင်း ခေါင်းလောင်းလေး🔔
တွေကို အိမ်နေရင်း 💁🏼‍♀️ဆိုင်ထိုင်ရင်း 🗣
💵မိမိ ရဲ့လခ (သို့)💸💴နေ့စဉ်
ဦးဦးဖျားဖျားနိုင်သလောက်ငွေ ပမာဏ ကို
💛ရွှေရောင် ကလပ်လေး ပေါ်တင်.
🔔သိဒ္ဓိတင် စမ အင်း ခေါင်းလောင်းလေး🔔
ပုံပါအတိုင်း နဲ့ဖိထား.ပါနော် 🤎🟥🟩🟦
👌🏻””ယ ခုလှူထားတဲ့ တပည့်တော်ရဲ့
သမ္မာအာဇီဝ ဝင်ငွေ တွေကို ဘုရား
တရား သံဃာ လှူဒါန်းဖို့အတွက်ပဲ
သုံးပါမယ် ဘုရား “””🙏🏻လို့
ပြီးရင် 🔔စမ အင်း ခေါင်းလောင်း လေး🔔ကို
သေချာလေး တီးပေး ရင်း 👋🏻👋🏻👋🏻
👄🔔”လာဘ်ရွှင်စေ 💍ငွေဝင်စေ” 🔔👄ဟု
( ၃ ) ခါ လောက်ဆိုကာ …နေ့စဉ် ခေါင်းလောင်း
🌸🌺ဘုရားပန်း တွေ သစ်သီးတွေ ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်…
ဝယ်ခြမ်းတာ စသဖြင့် လိုရာပြန်လှူလို့ရပါတယ်…ရှင့်🌿✅
🚫ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ 💯သုံးဖို့မဟုတ်ပါဘူးနော်…❌
🛑လောကီပညာအရ ငွေဝင် ရန်
နာမ် တူဓာတ်ဆင်ထားခြင်းပါ..ရှင် 🍁🌷🌹
စီရင်ပေမယ့် ပိုပြီး အကျိုး ထူးတာက
မိမိရဲ့အာစိဏ်ဏကံကုသိုလ် အကျိုးပေး က
လက်ငင်း အကျိုးပေးစေနိုင်ပါတယ်…ရှင့် 🌼🌸🌺
လှူဖို့အတွက်စု ပြီးသားဖြစ်သွားရော လေ နော် 🌝🌞
🤟🏻🤟🏻🤟🏻နံပါတ် (၃) နည်းလမ်း 🤟🏻🤟🏻🤟🏻
💪🏻နေ့စဉ် မဟာသမယသုတ်တော်ကြီး ၃၉ ပိုဒ်ကို
တစ်နေ့ (၃) ခေါက် အနည်းဆုံး ပူဇော်ပါ 🙏🏻
စျေးရောင်းမကောင်း ချိန် ဆို
တစ်နေ့ ၉ ခေါက် ရွတ်ဆိုပါ ရှင့် 😌😌😌
ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ အသံဖိုင် ဖွင့်
လည်း ပူဇော်နိုင်ပါ တယ် နော် 🙏🏻
ဆုဆိုင်မှာ ဓမ္မဒါန ပူဇော်ဖို့ နေ့စဉ် လှူနေတဲ့
"အသက်(၅၀)ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီး လွင်မိုးရဲ့ မွေးနေ့အလှူ"